Dhamma Video - Browse Media - Aa
Welcome Guest! ( မှတ်ပုံတင်ရန်။ Register · User Login )
Dhamma Photo Slideshow
Moe Nyin Sayardaw
ဘဒ္ဒန္တသုနန္ဒ မိုးညှင်း Pilot
အရှင်သူရိယ အရှင်သူရိယ မင်းကွန်း
အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်း MP3 အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်း MP3 Download Link
DHAMMANUPASSANA / ANICCASAYADAW
သဲအင်းဂူ Ch 3
ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ
Theravada Rector Ch-4
Dr.Min Tin Mon Ch-10
Ch-12 မိဘမေတ္တာ တရားတော်များ
Kyar Ni Kan Dhamma Radio
Dhamma Song Channel
Android Phone Version
Mobile Phone (Android)
Shwe Min Won Radio iPhone iPad iOS Radio Application
Dhamma Radio for iPhone
ကလေးများအတွက် MYANMAR DISNEY
Random Video +++
Dhamma Song TV Channel
ဦးကံညွှန့် ဦးကံညွှန့် သဲအင်းဂူ
အရှင်ဆေကိန္ဒ အရှင်ဆေကိန္ဒ ဗန်းမော်ဆရာတော်ြ�
ဒါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ
360 Degree Photo Panorama
Library Under Construction
Free Video Code Gen
Change Profile photo/avator
Other Member's Playlist
Enjoy Other's Playlist Collection
Upload Dhamma Photo
Edit your Own Dhamma Album
Upload Video, Books & MP3
Upload Video, Pdf & Mp3
Edit Uploaded Media
Hide or Show Profile
အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်း MP3 အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်း MP3 Download
သင့်ဝက်ဆိုဒ် Link ချ�
Share Dhamma on Facebook
Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ]- A - Arsaralinkarra - စစ်ကိုင်းရွှေဟင်္သာ အရှင်အာစာရလင်္ကာရ- A - Ashin Agganyarna - Ashin Agganyana - အရှင်အဂ္ဂဥာဏ - [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ]- A - Aung San sayardaw - အောင်ဆန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသဒ္ဓမ္မကိတ္တိသာရ- B - Bago Sayardaw Bhaddanta Tejosara – Tayzawtharra - ပဲခူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတေဇောသာရ- B - Bamaw Sayardaw - ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီး- B - Bodhitahtaung Bhaddanta Narada - ဗောဓိတစ်ထောင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနာရဒ- B - PhaYarPhoo AhPhwae - ဘုရားဖူးအဖွဲ့- B - Sayargyi U Ba Khin - တရားပြ ဆရာကြီးဦးဘခင်- C - Chanmyay Sayardaw - ချမ်းမြေ့ရိပ်သာဆရာတော်- D - ဘဒ္ဒန္တဓမ္မသာရမဟာထေရ် ( တောတိုက်ဓမ္မ၀ိသာရကျောင်းတိုက်ဆရာတော်)- D - Dhamma - ဓမ္မ- D - Dhamma Movies - ဓမ္မရုပ်ရှင်များ- D - Dhamma Songs - Dhammapuzar - ဓမ္မပူဇာတေးများ- G - gar htar taw myar - ဂါထာတော်များ- G - General Buddhism Knowledge - ဗဟုသုတရဖွယ်အဖုံဖုံ- G - S.N. Goenka - ဆရာကြီး ဦးဂိုအင်ဂါ- G - Tabhawasasanar U Ghawthita - ကျမ်းပြုအကျော် ဘဒ္ဒန္တဃောသိတမဟာထေရ်- H - History - သမိုင်း (မှတ်တမ်းများ)- K - ကြာနီကန်ဆရာတော် - Kyar Ni Kan Sayardaw- K - Ashin Kondalarbiwuntha - အရှင်ကုဏ္ဍလာဘိဝံသ (မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်ကြီး အရှင်ဇနကာဘိဝံသ၏ တပည့် မဟာဂန္ဓာရုံ နာယကချု�- K - Bhaddanta Kumarra - ပိဋကဆိုင်ရာ အင်္ဂလိပ်စာပေဌာန ကထိက- K - Bhaddanta Kumarra - ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရ(ကျောက်ပန်းတောင်းဆရာတော်)- K - First KaThitWine Sayardaw - မူလကသစ်ဝိုင် ဆရာတော်- K - Khantee Sayardaw Bhaddanta Sujana - Thuzana - ဝန်းသိုမြို့ ခန္တီးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုဇန- K - KonLon Sayardaw - ကုံလုံဆရာတော်ဘုရားကြီး- K - U Kyaw Hein - ဦးဇင်းကိတ္တိသာရ- L - Lalde Sayardaw - လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး- LIVE- M - Dr. Min Tin Mon - ဒေါက်တာမင်းတင်မွန်- M - Maha Bodhi Myaing Sayardaw - မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဝနဝါသီ အရှင်ဉေယျဓမ္မသာမိမဟာ- M - Majjhima gonyi sayardaw - မဇ္ဈိမဂုဏ်ရည်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တကောဝိဒ- M - MaSoeYain Student - မစိုးရိမ်စာသင်သား- M - Maung Htoung Myay Zin Sayardaw - မောင်းထောင်မြေဇင်းဆရာတော် (Video Only)- M - Mingun sayardaw - မင်းကွန်း ဆရာတော်- M - Moe Nyin Sayadaw - မိုးညှင်းဆရာတော်- M - Mogok sayardaw - မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တဝိမလမဟာထေရ်- M - Munle (Monlae) Tawya - မုံလယ်တောရဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသံဝရ- M - Myout Oo Sayartaw Ashin Waryar Mainda - အရှင်ဝါယာမိန္ဒ(မြောက်ဦးဆရာတော်)- M - U Myint Lwin - ဦးမြင့်လွင်- Mobile- N - Dr.Nandamalarbhivansa - Nandamarlarbhiwantha - ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ- N - Sidagu Sayardaw - Ashin Nyanissara - Nyarnitthara - သီတဂူဆရာတော် အရှင်ဉာဏိဿရ- N - U Narrada - မေဃ၀တီဆရာတော် ဦးနာရဒ- N - U Nawindalinkarra - ဦးနာဂိန္ဒလင်္ကာရ- O - U Oat Tan Tha - ဆရာတော်ဦးဥက္ကံသ- O - U Oattamatharra - သန်လျင်ဘုရားကုန်းသဘာဝရိပ်သာ- P - Dhamma Duta Ashin Pyin Nyar Zaw Ta - PinnyarJotta - ဓမ္မဒူတအရှင်ပညာဇောတ(တောင်စွန်းမြို့ )- P - non stop maha pahtan ceremonies - အသံမစဲမဟာပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပွဲ- P - Pagoda - SayDePaHtoeMyar - CeTiPaHtoeMyar - စေတီပုထိုးများ- P - Pakoku sayardaw - Dhammanupassana - Anicca Sayardaw - ပခုက္ကူဆရာတော်ဘုရားကြီး- P - Phar Auk Tawya Sayardaw - ဖားအောက်တောရ ဆရာတော်- P - Phyu Sayardaw Bhaddanta Narapati - ဖြူးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တနရပတိ- P - Pyin Nyar Darna Myar - ပညာဒါနများ- P - Sitagu One Star - Thitagu - ဘဒ္ဒန္တပညာနန္ဒ (သီတဂူကြယ်တစ်ပွင့်)- P - U Ponnyarnanda - ဦးပုညာနန္ဒ- R - Ashin Rajinda.Rajeinda - Rarzeinda - YaWaiNwe - အရှင်ရာဇိန္ဒ(ရဝေနွယ်…အင်းမ)- R - Recorded Live - တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော ဗီဒီယိုများ- S - Ashin Ardacsaransi U San Lwin - အရှင်အာဒိစ္စရံသီ (ဦးဆန်းလွင်)- S - Ashin Chandadhika - ShweParrami Tawya - Sandardhika - အရှင်ဆန္ဒာဓိက(ရွှေပါရမီတောရ)- S - Dhammaduta Ashin Chekinda - Saykeinda - ဓမ္မဒူတဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ- S - Sar Taung Sayardaw - ဆားတောင်ဆရာတော်- S - Sar War - ပရိယတ္တိ စာသင်တိုက် စာဝါပို့ချချက်များ- S - Shwe Lin Yone Sayardaw - ရွှေလင်းယုန်ဆရာတော်- S - Shwe Nya War - Ashin Pinnyasiha - U pyin nyar thiha - ရွှေည၀ါဆရာတော် ဦးပညာသီဟ- S - Sin Phyu Kyun Sayardaw - ဆင်ဖြူကျွန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဓမ္မသာရ- S - SuPaung YaHanKhan ShinPyu - စုပေါင်း ရဟန်းခံ၊ရှင်ပြု- T - Ashin Suriya - Thuriya - အရှင်သူရိယ- T - Dhammacakkyar dawal Ashin Soma – Thawma - ဓမ္မစင်္ကြာ-ထားဝယ် အရှင်သောမ- T - Maharsi sayardaw - U Thawbhana - မဟာစည်ဆရာတော် ဦးသောဘန- T - Metta aye sayardaw Bhaddanta Sujata - Thuzarta - မေတ္တာအေးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုဇာတ- T - Mogok dhammaransi Bhaddanta Thunanda - မိုးကုတ်ဓမ္မရံသီရိပ်သာဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုနန္ဒ- T - MyaingGyiNgu Sayardaw - U thuzana - မြိုင်ကြီးငူဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တသုဇန- T - Taungtan sayardaw U Uttamasara - တောင်တန်းသာသနာပြု ဦးဥတ္တမသာရ- T - TharMaNyaTaung sayardaw -U Winara - သာမညတောင်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝိနယ- T - ThaZinYayKyaw Sayardaw Bhaddanta - NyarNawBarTha - သဇင်ရေကျော်ဆရာတော်- T - Theingu Sayardaw Bhaddanta Ukkahta - U Oak Ka Hta - သဲအင်းဂူဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဥက္ကဋ္ဌ- T - Theinngu - သဲအင်းဂူ- T - Thi La Ganda - သီလကဏ္ဍ- T - Twantay Sayardaw Bhaddanta Indaka - eindaka - တွံတေးဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒက- T - U Sumingala – Thumingala - ဒယ်အိုးဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ- T - U Thu Ma Na - U SuMaNa - ဦးသုမန (စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆရာတော်)- W - BhadDanTa Wilartha - ဘဒ္ဒန္တဝိလာသ (ကျောက်လုံးကြီး)- W - U Wirathu - ဦးဝီရသူ (မစိုးရိမ်)- W - Waibuu sayardaw - ကျေးဇူးတော်ရှင်ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီး- W - WarKhinGone sayardaw BhadDanTa Tikkha - ဝါခင်းကုန်းဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတိက္ခ- Y - Yaw Sayardaw Bhadanta Thiraindarbiwuntha - ယောဆရာတော် (ဘဒ္ဒန္တသိရိန္ဒာဘိဝံသ)- Y - YaySaKyo(YaySaGyo) - WarYaMeinDarBhiWunTha - ရေစကြိုဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဝါယာမိန္ဒာဘိဝံသ- Y - YinKyayHmu ThinDan - ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း- Z - Ashin Zanitarlinkarra - Ashin Agganyarna - အရှင်ဇနိတာလင်္ကာရ- Z - Ashin Zeyapandita (Moe Nyin Pilot Sayardaw) - အရှင်ဇေယျပဏ္ဍိတ (မိုးညှင်းပိုင်းလော့ဆရာတော်)- Z - Maha GanDarYone Ashin Janakabivimsa - Zanakar BiWunTha - မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ- Z - Mettashin ShwePyiThar - U Zawana - အရှင်ဇဝန - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ)- Z - Pyinmanar Maharbawdimyaing - U Zawtika- ပျဉ်းမနား၊ မဟာဗောဓိမြိုင်တောရဆရာတော် ဦးဇောတိက- Z - U zawtika - Pakkouku - ဦးဇောတိက (ဓမ္မသုခရိပ်သာ ပခုက္ကူမြို့) ကာတွန်းစာအုပ်/ဂျာနယ်/စသည့်... Books - ဓမ္မရေးရာစာအုပ်များ Cartoon - ကာတွန်းစာအုပ်/ဂျာနယ်/စာစောင်/စသည့်... Dhamma Photos - Dhamma Picture - Dhamma Paint - ဓမ္မဓါတ်ပုံများ Knowledge Books - ဗဟုသုတ/ရသစုံ/မဂ္ဂဇင်း/ဝတ္ထု/စသည့်... News - သတင်းများ
T - U Sumingala – Thumingala - ဒယ်အိုးဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ - Most Recent
M - Mogok sayardaw - မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တဝိမလမဟာထေရ် / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ပဋိစ္စသမုပ...
Added: 25th August 2011
Posted By: thiri
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စက်ဝိုင်းဒေသနာတော် (၁) Mogok Circle 1
http://www.thukhayate.blogspot.com/ မှ ကျေးဇူးပြုပါသည်။
Tags: ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စက်ဝိုင်းဒေသနာတော် (၁) ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် မိုးကုတ်ဆရာတော် မိုးကုတ် mogoksayardaw mogok sayardaw sayartaw T - U Sumingala – Thumingala - ဒယ်အိုးဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ပဋ္ဌာန်းဒေသ...
Added: 14th March 2011
ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်) - ပဋ္ဌာန်းဒေသနာ တရားတော် - UTMGL - Patthan - part - 1 to 25
Tags: ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်) T - U Sumingala – Thumingala - ဒယ်အိုးဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အဝိဂတပစ္စေ...
Added: 12th March 2011
ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်) - အဝိဂတပစ္စယော - UTMGL - Patthan - part 25,(1 to 25)
Tags: ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်) T - U Sumingala – Thumingala - ဒယ်အိုးဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဝိဂတပစ္စယေ...
ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်) - ဝိဂတပစ္စယော - UTMGL - Patthan - part 24,(1 to 25)
Tags: ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်) T - U Sumingala – Thumingala - ဒယ်အိုးဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] နတ္ထိပစ္စယေ...
ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်) - နတ္ထိပစ္စယော - UTMGL - Patthan - part 23,(1 to 25)
Tags: ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်) T - U Sumingala – Thumingala - ဒယ်အိုးဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] အတ္တိပစ္စယေ...
ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်) - အတ္တိပစ္စယော - UTMGL - Patthan - part 22,(1 to 25)
Tags: ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်) T - U Sumingala – Thumingala - ဒယ်အိုးဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဝိပ္ပယုတပစ...
ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်) - ဝိပ္ပယုတပစ္စယော - UTMGL - Patthan - part 21,(1 to 25)
Tags: ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်) T - U Sumingala – Thumingala - ဒယ်အိုးဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] သမ္ပယုတ္တပစ...
ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်) - သမ္ပယုတ္တပစ္စယော - UTMGL - Patthan - part 20,(1 to 25)
Tags: ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်) T - U Sumingala – Thumingala - ဒယ်အိုးဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] ဟေတုပစ္စယေ...
ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်) - ဟေတုပစ္စယော - UTMGL - Patthan - part 2,(1 to 25)
Tags: ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်) T - U Sumingala – Thumingala - ဒယ်အိုးဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ / Audio/Video [ ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များသာ ] မဂ္ဂပစ္စယော...
ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်) - မဂ္ဂပစ္စယော - UTMGL - Patthan - part 19,(1 to 25)
Tags: ဦးသုမင်္ဂလ(ဒယ်အိုးဆရာတော်) Pages: 1234567 of 10
၁။ ပင်မစာမျက်နှာ (Homepage)တွင် စေတီပုထိုးတော်များဖူးမျှော်နိုင်ခြင်း၊ ဆရာတော်ကြီးများ၏ တရားတော်များနှင့် သီလဆိုင်ရာတရားတော်များနာကြားနိုင်ခြင်း၊ ရဟန်းခံရှင်ပြု၊ ဗုဒ္ဓဂယာ ဘုရားဖူး၊ အသံမစဲ ပဋ္ဌာန်းပူဇော်ပွဲ၊ သီလပေး- တို့အပြင် ထူးထူးခြားခြားအနေဖြင့် မဟာဗုဒ္ဓ၀င်၊ ကောသလအိပ်မက် ၁၆ ချက်၊ မြိုင်ကြီးငူဆရာတော် စသည်တို့၏ ဓါတ်ပုံများအား ဆလိုက်ရှိုးများပြသထားကာ၊ ထိုဆလိုက် ရှိုးများအပါအ၀င် တီဗီ ဗီဒီယိုအားလုံး၏ Embedded code တို့ကို မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင် ၀က်ဘ်ဆိုက်များသို့ ကူးယူနိုင်ပါသည်။
၂။ မီဒီယာ စာမျက်နှာ (Media Category)တွင် ဆရာတော်ကြီးများ၏ ဘွဲ့တော်များအလိုက်ခွဲခြားကာ မိမိနာကြားလိုသည်ကို နာကြားနိုင်ရန် စီစဉ်ထားခြင်း၊
၃။ ရေဒီယို စာမျက်နှာ (Radio CH) နှင့် တီဗီစာမျက်နှာ (TV CH) တို့တွင် မိမိတို့ အလိုရှိရာလိုင်း (Chanel) ကို နာကြားကြည်ညိုနိုင်ခြင်း။
Radio Channels Playlists
Photo Slideshow Widgets Page
Thank you for taking the tour!
We hope that you will consider joining our community. It's FREE and only takesaminute.